Dad Qalatada Cusub.
Dabcan Soomaalidu dhalaankooda dhagaha ugu sheegaan sheekooyin salal leh, kutiri-kuteena ah sida dhag-dheer oo mindi daabad lehna sidato. wixii dhalaanimo na lagu sheegay ayaad waxaad mooda inay dhaboowday oo maanta Soomaaliya waxaa ka dilaacday waraabo-dadow badan oo maalinkastaba wax dhooxo.
Haddaba waa kuwee dad-qalatada cusub? dad-qalatada cusub waa kuwa afcaashooda si bareer ah noogu muuqato waana kuwo dhagar xanbaarsan oo walina dhibka dalka ka wada , waa kuwii kal hore dooxay Cawil, Abyan, Elman , Talan, iyo inta ubad ku agoomoobay Soomaaliya.
Liiska dad-qalatada waa mid dheer oo taxane ah, magacyo badan huwan sida Ganacsade, afahayeen, qab-qable, madaxweyne, la taliye, kitaab-gaab, dalaale, daba-qalooc, garaashle, daroogale, buushle, ku meel gaare, codeeye, ansixiye, xil-dhibaan, gori-gade, hay'ad keene, af-duube, maryo-calas, baad-qaate, jid-gooye, qabiil-quute, shisheeye dawarsade, buun-buuniye wariye , shaki-beere, aqoon-dumiye, web-waabeye, caydh wax ku alhuumeeye, beel-beeleeye, been-abuure, darajaale, dacareeye, dabo-tukube, danlaawe, dib-jire, lagu daneeste, dirire, dab-shide, mooryaaneste, bililqayste, qashin-qube, xaalufeeste, gomo-gooste, waxkaskasto anaa leh, kala -dhantaale, dira-diraale, danayste, u qayile, qowsaare, boobe, dhalan-roge, heeryo-cune, dhalo-siiste, iyo inta is qariska ah.
waxaana dhab ah in liiskaas in dad badan oo Soomaali ah ka turjumayo iyo sida xilkas darida ah dalkoodi u dumiyeen walina lagu dhago -adag yahay inaan marnaba la heshiin waayo shirkasto la qabto waxaa horboodayo damaca liiska dheer aan dhamaadka la heyn.
Geel labo jir soo wada mar dhalaankasto Soomaali ahna waxyaabi lagu cabsiin-jiray ma ahayn ula-kac oo ujeeda waxay ahayd in daarada aqalkooda dhaafin kuna habaabin meel cidla ah , maantase dhalaankeenu uma baahno wax lagu salalo oo kutiri-kuteen oo waxaa sida dharaarta ugu muuqato dad-qalatada cusub oo ehelkooda maalinkasto fagaarha ku dhooxato.